Israel oo bilaawday daad gureynta qoysaska diblumaasiyiinteeda ku dhaqan Itoobiya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Israel oo bilaawday daad gureynta qoysaska diblumaasiyiinteeda ku dhaqan Itoobiya
Israel oo bilaawday daad gureynta qoysaska diblumaasiyiinteeda ku dhaqan Itoobiya
Wasaaradda arrimaha dibadda Israa’iil ayaa billowday in ay daadgureyso dhowr qoys oo diblomaasiyiin ah oo ku sugnaa Itoobiya, Walla! Mareegaha wararka ayaa daaha ka qaaday fiidnimadii sabtida, iyadoo uu dhinac socday dagaalka oo sii xoogaystay todobaadkan u dhexeeya ciidamada dawladda iyo fallaagada Tigreega.
Afhayeen u hadlay wasaaradda Lior Hayat, ayaa caddeeyay in dublamaasiyiinta Israa’iil ay sii wateen shaqadooda safaaradda Addis Ababa, “laakin marka laga reebo hubanti la’aanta iyo xaaladda ka sii dari karta, qoysaska qaar waxay ku noqdeen Israa’iil.
Wasaarada arimaha dibada ayaa sidoo kale ku talisay in muwaadiniinta Israel ay ka fogaadaan inay booqdaan wadanka ku yaala bariga Africa oo mudo sanad ah dagaal kula jira kooxda Tigray People’s Liberation Front (TPLF) ee ka dagaalanta waqooyiga dalkaasi.
“Wasaaradda arrimaha dibedda waxay ku talinaysaa in muwaadiniinta Israa’iil ee deggan Itoobiya ay joojiyaan joogitaankooda dalka sababo la xidhiidha kacdoonnada shacabka, carqaladaynta dhaqdhaqaaqa iyo helitaanka isgaadhsiinta iyo suurtogalnimada xataa inay diyaarad ku bixi kari waayaan,” ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
Intii lagu guda jiray shir jaraa’id oo uu qabtay fiidnimadii Sabtida, Ra’iisul Wasaare Naftali Bennett wuxuu sheegay in uu la xidhiidhay dalal kale si uu “si dhow ula socdo waxa ka dhacaya Itoobiya.”
Arbacadii hore, Aliyah iyo wasiirka isdhexgalka Pnina Tamano-Shata oo asalkeedu yahay Itoobiya ayaa warqad rasmi ah u dirtay Bennett iyada oo ka codsanaysa inuu si degdeg ah ula socdo Israa’iiliyiinta Itoobiyaanka ah, waayo waxay ka welwel qabtaa dagaalka sokeeye ee sii kordhaya ee halkaas ka socda.
Previous articleQofkii u horeeyey ee qaba xanuunka Albino ayaa ka mid noqday baarlamaanka Malawi.
Next articleMarooko waxay xiisaynaysaa nidaamka difaaca Iron Dome ee Israa’iil